laacib » David Silva oo ka sheekeeyey xaaladda Wiilkiisa Dhicisnimada ku dhashay – Miyuu ka baaqday safarkii kooxdu ku aaday Abu Dhabi?
David Silva oo ka sheekeeyey xaaladda Wiilkiisa Dhicisnimada ku dhashay – Miyuu ka baaqday safarkii kooxdu ku aaday Abu Dhabi?
Xiddiga khadka dhexe ee laacibkii Manchester City David Silva ayaa ka sheekeeyey xaaladda wiilkiisa dhiciska ah, kaddib kulankii xalay ay guusha ka gaareen Stoke.
Silva ayaa dhaliyey labadii gool ee ay xalay kooxdiisa Man City kaga adkaatay Stoke City taa oo la micno ah in laacibkii Pep Guardiola ay u baahan tahay inay labo kulan oo qura guul gaarto si loogu caleemo saaro hanashada horyaalka.
Laacibkan muhiimka u ah laacibkii Man City ee David Silva ayaa seegay dhowr kulan oo ay kooxdiisu ciyaartay sababo la xiriira wiilkiisa xanuunsanaya ee dhicisnimada ku dhashay.
Waxaa jira warar qaar ka mid ah warbaahinta Ingiriisku ay qoreyso oo sheegaya in uu David Silva sabab la xiriirta Wiilkiisa dhiciska ah kaga haray safarkii ay kooxdiisa Manchester City ku aaday Magaalada Abu Dhabi si ay halkaas ugu soo qoraxeysato.
Xiddiga xulka qaranka Spain ayaa sheegay in wiilkiisa dhiciska ku dhashay ee Mateo uu dagaalamayo, isla markaana ay xaaladdiisa ka soo wanaagsanaanayso marba marka ka dambeeya, isagoo qirtay in ciyaarista kubadda cagta uu isku ilowsiiyo xaaladda murugada leh ee ka jirta gurigiisa.
“Waxaan u maleynayaa inaan wax kasta ilaawo marka aan ciyaarayo kubadda cagta, way ii fiican tahay aniga inaan ciyaaro, waan ogahay in nolosheyda gaarka ah aysan ahayn waqti farxad badan.” ayuu yiri 32-sano jirkaan.
“Wiilkeygu wuu dagaalamayaa, waad ogtahay aad ayaana u faraxsanahay, maxaa yeelay wuu soo xoogsanayaa wuuna soo fiicnaanayaa, sidaa darteed waa Ok.”